कालोबजारी रोक्न वाणिज्य विभागले छापा मारेर कारवाही गर्न थालेपछि ‘यहाँ मास्क छैन’बोर्ड - नेपालबहस
कालोबजारी रोक्न वाणिज्य विभागले छापा मारेर कारवाही गर्न थालेपछि ‘यहाँ मास्क छैन’बोर्ड
| ११:०५:१५ मा प्रकाशित
२५ फागुन भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–१ च्यामासिंहस्थित साँचो फार्मेसीले ‘यहाँ मास्क छैन’ भन्ने बोर्ड नै टाँसेको छ । त्यहाँ मात्रै होइन, यहाँकै च्यामासिंह मेडिकल, आरती फर्मालगायत यहाँका अधिकांश औषधि पसल तथा क्लिनिकले त्यस्ता बोर्ड झुण््याएका छन् ।
औषधि पसलमा दैनिक १०० भन्दा बढी मानिस मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर खोज्न आउने तर छैन भन्दाभन्दा हैरान भएपछि बोर्ड नै टाँस्नुपरेको साँचो फार्मेसीका सञ्चालक चन्द्र प्रजापति बताउछन् । मास्क हुँदा रु १० सम्म बिक्री गरेको तर एक सातादेखि नआएपछि बिक्री गर्न नपाएको र अहिले १०० भन्दा बढी मानिस मास्क खोज्न आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
आरती फर्माका सञ्चालक सुविन श्रेष्ठले दुई सातादेखि मास्क बिक्री गर्न नपाएको बताउछन् । “कपडाको मास्क बिक्री गर्न राखे पनि कसैले लैजाँदैन, एक बट्टामा ५० थान मास्क हुन्छ, अहिले डिलरले नै मास्क छैन भनेर नपठाएपछि बिक्री गर्न नपाएको दुई साता भयो”, उनले भने ।
च्यामासिंह मेडिकलका सञ्चालक दीप श्रेष्ठ डिलरले मास्क नदिएपछि बिक्री गर्न नपाएको र अन्य औषधिको पनि अहिले माग बढेको जानकारी दिए । उनले भने, “विशेषगरी ह्यान्ड सेनिटाइजर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दम, रुघाखोकी, ज्वरोको औषधि लिन आउने ह्वात्तै बढेका छन् ।”
जिल्ला अस्पतालमा मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर लिन आएका भोलाछेँका रामसुन्दर श्रेष्ठले जिल्लामा कतै पनि ती सामग्री नपाएको बताए । बीमाको औषधिमा समेत ठूलै लाइन लाग्ने गरेको छ । उनले भने, “कोरिया नेपालमैत्री अस्पताल ठिमीमा बिमाको औषधि लिनेको घुइँचो छ, भक्तपुर अस्पतालमा पनि त्यस्तै देखेँ, औषधि आउँदैन भन्ने हल्लाले उपभोक्ता नै चार महिनासम्मलाई पुग्ने औषधि लान थालेको पाएँ ।”
औषधि व्यापारी पनि डिलरले औषधि कम पठाउन थालेको बताउँछन् । भक्तपुरमा औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रामकुमार थापाले डिलर र उत्पादकले नै औषधि कम पठाउन थालेपछि औषधिमा समेत कालो बजारी बढ्न थालेको बताए ।
मध्यपुरथिमिमा औषधि व्यापार गर्दै आएका क्लिनिक सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठले मिडियाले हल्ला फैलाएपछि समस्या आएको गुनासो गरे । उनले भने, “ हल्लाको भरमा मान्छे लाग्दा अहिले मूल्य निर्धारण भएर आउने औषधिमा समेत कालोबजारी हुन थालेको छ ।” भारतले औषधि रोक्यो, औषधि अभाव हुन्छ समाचार आएपछि माग बढेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म बजार अनुगमन नहुँदा केही औषधि व्यापारीले एक÷दुई महिना मात्रै म्याद रहेका औषधि र कतिपय म्याद गुज्रेका औषधिसमेत बिक्री गर्न थालेको उपभोक्ता गुनासो गर्छन् । उपभोक्ता सचेत नहुँदा अझै पनि अन्तिम मिति हेरेर औषधि नलैजाने गरेकाले उपभोक्ता सजिलै ठगिने क्रम पनि बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि बजारअनुगमन गर्ने बताए ।
भक्तपुर अस्पताललाई ‘आइसोलेशन वार्ड’ स्थापना गर्न निर्देशन १ वर्ष पहिले
कोरोना भाइरसबारे विद्यार्थीहरुमा चेतना अभिवृद्धि गर्न निर्देशन १ वर्ष पहिले
‘ख्वपको पहिचान’सहितको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी १ वर्ष पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? ४० मिनेट पहिले
अपि पावरको मुनाफा १२ करोड ६२ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? २ दिन पहिले
बलिउड नायक अक्षय कुमारलाई कोरोना संक्रमण १ हप्ता पहिले
नेपालबाट हराएका मूर्ति ३७ वर्षपछि अमेरिकामा फेला ४ हप्ता पहिले
अधिकांश मन्त्री दोहरिंदै १ दिन पहिले
निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि ! तर पनि सिटिजन्स बैंकको खराब प्रदर्शन कायमै, मुनाफामा गयो पहिरो ९ महिना पहिले
अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रचण्डविरुद्ध गुप्तचर संस्थामा उजुरी ! २ वर्ष पहिले
शुरु भयो पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल ७ महिना पहिले
भारत दक्षिण एशिया कै छुद्र मुलुक १२ महिना पहिले